Egwuregwu Mascot Na-eweta Bastet Ọhụrụ 3D na nwamba - latabernasanlucar.com
Mgbe ezigbo ihe ịga nke ọma nke Merry Scary Christmas oghere Mascot Gambling na-emesị hapụ egwuregwu 3D nke abụọ un Bastet na Nwamba dabere na eserese ndị Ijipt na-adọrọ mmasị. Inwe isi ihe egwu ha & Zụta ebe, ụlọ ọrụ ahụ na-ewepụtakwa igwe egwuregwu ọhụụ Rockfall.
Egypt bụ n’ezie onye ndu nke ihe egwuregwu oghere n’etiti ndị egwuregwu egwuregwu. Iguzosi iken’ihe nye usoro ihe ọchị ha pụrụ iche, Mascot Gambling na-enye nkọwa ọhụrụ banyere isiokwu a. Oge a onye isi agwa bụ Bastet – chi nwanyị Ijipt nke ịhụnanya, ọ joyụ, na nwamba. Gamine na obi ụtọ, ọ ga-anabata ihe ọ bụla!
Ihe izizi 3D Mascot Gaming launch akpọwo oghere nke ọnwa website Id otu mgbasa ozi ụlọ ọrụ na-akwanyere ùgwù. Egwuregwu nke abụọ na setịpụrụ nwere ụfọdụ ọrụ na-abụghị ọkọlọtọ a na-akpọ Rockfall: kama akara ngosi kpochapụwo, akara akara na-ada na mbara egwuregwu websiten’elu website Id mmeri ngwakọta na-apụ na ihuenyo. Ewezuga nke ahụ, na Rockfall ọ bụla, mmeri na-emeri na-abawanye: ruo x5 na egwuregwu mgbe niile yana ruo x15 na usoro ntanye n’efu.
Mascot Gaming complimentary twist spin na-ekwe nkwa ọ joyụ ndị ọzọ: t Bastet t nwamba ọnụ ọgụgụ un adịghị edozi, mana ọ dabere na akara ngosi achụsasị. Website t atụmatụ a na-ekposa ekpogharị, ntụgharị ọ bụla na-enye ọtụtụ ọnụọgụn’efu ma ọ bụ self na-eme ka nnukwu onyinye na egwuregwu na-adịte aka. Ihe bụ ihe ọzọ, extra usoro nwere ike nwetan’oge complimentary atụ ogho usoro.
Dị ka that a na-achị, oghere nwere isi ihe Mascot Gambling – Danger t Zụta ebe onye ọkpụkpọ nwere ike ịzụta nnwere onwen’efu ma ọ bụ tinye ihe mmeri ya ịnweta karịa.
Reels – 5 × 4 Paylines – 40 RTP – 95.0
Onu ogugu – 46.9percent Volatility – reduced
Margarita Malysheva, Onye isi ahia na Mascot Gambling:”Anyị na-achọ ịmụrụ ndị egwuregwu egwu egwuregwu ọhụrụ, ọ bụ ya only t anyị ejighị isiokwu 3D Ijipt mara mma, mana agbakwunye atụmatụ niile kachasị mma – Rockfall multipliers, Risk & Purchase ogologo usoro ntanyen’efu. Anyị kwenyesiri ike na egwuregwu 3D anyị nke abụọ ga-ewu ewu dị ka mbipụta ekeresimesi d e ọbụna karịa! Enweghị ọtụtụ egwuregwu nwere njirimara Rockfall na ahịa, yabụ onye ọ bụla kwesịrị ịlele mbọ anyị. Basted na nwamba bụ superhit! ”
Bọchị ntọhapụ: 20 Eprel 2021
njehie: Ọdịnaya na-echebe !!
Ego Bitcoin VS Bitcoin – Blogt Wildtornado